Home Wararka Dibada Muslimiin tiro badan oo dalbanaya in ay is casisho ra’isulwasaaraha dalkooda arrinkii...
Muslimiin tiro badan oo dalbanaya in ay is casisho ra’isulwasaaraha dalkooda arrinkii nabiga (NNKH) awgeed
Haweeneyda Ra’isul wasaaraha ka ah dalka Bangladesh Sheekh Xasiina ayaa cadaadis xooggan la kulmeyso kaddib markii ay ka aamustay aflagaaddadi ay toddobaadki hore siyaasiyiin Hindiya ka soo jeeda ay u geysteen Nabi Muxammed (NNKH).
Sheekh Xasiina oo soo saartay bayaan ay kaga hadleysay doorashada dalka Bangladesh ka dhaceyso 2023-ka ayaan soo hadal qaadin aflagaaddada Nabiga (NNKH) loo geystay oo waddamo badan muslimiin ah ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen.
Caasimadda dalkaasi ee Dhaka iyo magaalooyinka kale ee dalka Bangladesh waxaa ka dhacay mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo afhayeenkii hore ee xisbiga BJP Nupur Sharma kaasi oo xiriir la leh aflagaaddadi ay u geysatay Nabi Muxamed (NNKH).
Dadka mudaharaadaya ayaa ku dhawaaqayey hal ku dhigyo ka dhan ah Nupur Sharma iyaga oo sitay sawir gacmeedyo isla-markaana dalbanayey in xabsiga loo taxaabo.
Sheekh Xasiina, Ra’isul Wasaaraha Bangladesh waxaa soo food saaray cadaadis xooggan oo salka ku hayso kiiska ay muslimiintu u haytsaan siyaasiyihiinta reer Hindiya ee ku xadgudubay sharfata Nabiga (NNKH) iney ka aamustay.
Xasiina ayaa dooneyso Ra’isul Wasaaranimo iney isu soo sharraxdo doorashada guud ee 2023-ka dalkaasi ka dhaceyso.
Wargeyska Hindu oo soo xigatay xubno ka tirsan xisbiga ALP waxay sheegeen mudaharaadyada ka dhashay aflagaaaddada siyaasiyiin ka tirsan xisbiga BJP ay u geysteen Nabi Muxammed (NNKH) ay saameyn ku yeelaneyso booqahada ay Sheikh Xasini ay ku tageyso Hindiya.
Waxaana sii kordhaya cadaadiska Sheekh Xasiina lagu saarayo iney mowqifka ay aflagadda loo geystay Rasuulka (NNKH) ay iska taageyso iney caddeysato.
Muslimiinta iyo Yuhuudda oo ka mideysan diidmada go’aan maxkamaddeed
Muslimiinta Mareykanka oo cambaareeyay weerarkii Ohio
‘Muslimiinta asxaan ugumaysan sameyn Hindiya inay halkan joogaan’
Khandkar Ghulam Moula Naqshbandi oo ka tirsan xisbiga ALP wuxuu sheegay xilligan oo baarlamaanka uu yeelanayo kulan uu uga hadlayo arrimaha miisaaniyadda iney habboon tahay Sheekh Xasiina haddii ay gudbiso farriin cad oo arrintan ku saabsan ay keeneyso shacabka iney qancaan kaddibna mudaharaadyada ay joojiyaan.
Ghulam wuxuu intaa ku daray hadii uu xaalku sidan ku sii socda Ra’isal wasaarahana mowqifkeeda ay shacabka careysan u caddeyn waxay saameyn lixaad leh ay uu geysan kartaa doorashada 2023-ka oo ay dooneyso Shekha Xasin iney ka qayb gasho.
Ra’isul wasaare Sheikh Xasiina oo dalka Hindiya booqasha ku tagtay 2019-ki waxaa loo arkay iney saaxibtinimo wanaagsan la yeelatay Delhi, xiiligaasi oo ay ku beegneyd marki ay Hindiya ay meesha ka saartay sharciga Kasmiir u oggolaanayey ismaamul hoosaad.
Tallabbada ay Hindiya xilligaasi qaadday waxaa cambaareeyey Pakistan iyo Shiinaha.
Hindiya ayaa wajahaysa cadaadis diblomaasiyadeed oo ka dhashay hadallo muran badan dhaliyay oo sarkaal sare oo xubin ka ah xisbiga maamulka dalkaasi haya ee Bharatiya Janata Party (BJP) ku aflagadeysay Nebi Muxamed (NNKH).
Waa tuma gabadha Hindiya ah ee aflagaaddeysay Rasuulka (NNKH)?
Muslimiinta Ukraine oo wadnaha farta ku haya
Muslimiinta reer Ukraine: ‘Ramadaankani waa mid xanuun badan’
Nupur Sharma ayaa 10 maalmood ka hor gefkaasi ku kacday kaddib markii ay ka qaybgashay dood TV, arrintaasi oo ka careysiisay Muslimiinta Hindiya, iyo in ka badan 12 dowladood oo Muslim ah.
Axaddii, xisbiga BJP ayaa shaqada ka joojiyay Sharma. Waxaa kaloo isna shaqada laga joojiyay madaxa qaybta warbaahinta Delhi ee xisbiga, Naveen Kumar Jindal, kaddib markii uu dadka la wadaagay sawirka aflagaadada ah.
Maxay tahay arrinta uu Shiinaha ku sameynayo carruurta Muslimiinta Uighur ee la dhalleeceeyay?
Shiinaha ma wuxuu ‘dabar goynayaa’ Muslimiinta Uyghurs?
Diblomaasiyiinta Hindiya ayaa isku dayaya in ay ka dhaadhiciyaan waddamada Islaamka ee aad uga carooday gefka Nebiga (NNKH), waxay sheegeen in faallooyinka aysan ka tarjumayn mowqifka dowladda oo ay yihiin “aragtida xagjirka”.
Carada Dunida Muslimka
Dalalka Kuwait, Qadar iyo Iran ayaa Axaddii u yeeray safiirrada Hindiya si ay u muujiyaan caradooda ka dhanka ah arrintan. Sacuudiga ayaa sidoo kale cambaareeyay hadalkaas.
Qadar ayaa sheegtay in ay Hindiya ka rajeyneyso raalligelin dadweyne.
“In la oggolaado in hadallada Islaam nacaybka ah ay sii socdaan ciqaab-la’aan, waxay ka dhigan tahay halis weyn oo ku wajahan ilaalinta xuquuqul-insaanka, waxaana laga yaabaa inay horseeddo nacayb iyo takoor hor leh, taas oo abuuri doonta colaad iyo nacayb hor leh,” ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Qadar.
Sacuudiga ayaa sidoo kale falkaan ka muujiya caro adag. “Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa cambaareysay hadalladii ka soo yeeray afhayeenka xisbiga Bharatiya Janata Party (BJP) ee Hindiya, ee lagu aflagaadeeyay Nebi Muxamed, naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaatee, waxayna mar kale xaqiijinaysaa diidmada joogtada ah ee nacaybka ka dhanka ah diinta Islaamka,” ayaa lagu yiri.
Caqabadaha ay wajahaan Muslimiinta madow ee guur doonka ah
Safiirka India u fadhiya Qadar, Deepak Mittal, ayaa sheegay in hadallada ka soo yeeraya qaar ka tirsan ‘dadka nacaybka ku xeeldheer’ aysan matalin aragtida dowladda Hindiya. Hoggaamiyeyaasha sare ee BJP iyo safiirrada kale ayaa sidoo kale cambaareeyay hadalka muranka dhaliyay.
Balse, dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in laga yaabo in hoggaanka sare ee xisbiga iyo xukuumaddu ay ku qasban yihiin inay si cad uga hadlaan arrintan. “Haddii aan sidaas la yeelin,” ayay yiraahdeen, “waxaa halis ah in ay dhaawacdo xiriirka Hindiya ay la leedahay dalalkan.”
Previous articleKOOXDA Madrid Oo Xaqiijisay In Ay Dhamaystirtay Saxiixa Aurelien Djani Tchouameni
Next articleKuldhara: Jacaylkii kallifay in tuulo dhan laga guuro
Dagaal Khasaaro Badan Dhaliyay Oo Ka Dhacay Gobolka Hiiraan
Florentino Perez oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay, in kooxdiisu...